केटीलाई गुलावी र केटालाई नीलो रंग नै किन ? | latestnepali.com
हामीले आफ्नो बच्चालाई रंगकै आधारमा विभाजन गरेका छौं, के कारण होला ? सायद यसको जवाफ तपाई हामी कसैसँग पनि छैन । लिंगका आधारमा रंगको छनोट अहिले होइन, यो निकै वर्षदेखि चल्दै आएको पाइन्छ । रंग छनोट पुस्तान्तरण हुँदै आएको छ ।
धेरैले यसलाई पेरिस–फ्रेन्च सभ्यताको देन मानेका छन् । पेरिसलाई फेसनको राजधानी मानिन्छ । १९४० को दशकमा पेरिसमा महिलाका लागि गुलावी र पुरुषका लागि नीलो रंग प्राथमिकता दिइन्थ्यो । यो प्रचलन पेरिसबाट संसारका अधिकांश देशमा चल्न थाल्यो । यो फेसनको एउटा टे«न्ड मानियो, जुन धेरै लोकप्रिय भएपछि मान्यता स्थापित भयो ।
केटीका लागि गुलावी र केटालाई नीलो रंग छनोट गरिने अन्य कारण
१. यदि हामी बच्चाका लागि कुनै पनि वस्तु खरिद गर्न बजार गयौं भने त्यहाँ गुलावी र नीलो रंगको मात्रै बढी देख्न पाउँछौं । तपाई छोरीको सामान किन्न जाुनभयो भने गुडिया, रसोई सेट या मेकअपका सामान गुलावी बक्समा राखेको पाइन्छ । त्यस्तै, छोराका लागि किन्न गयौं भने कार, ट्रक या रिमोट कन्ट्रोल नीलो रंगको बाकसमा राखेको पाउँछौं ।
२. धेरै मार्केटिङ एक्सपर्टहरु रंगको मनोविज्ञानअनुसार आफ्नो रणनीति तय गर्छन् भनिन्छ । यसमा सामान बेच्नेवालाको देखावट पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । बजारको मनोविज्ञानअनुसार नीलो रंग लगाउने इमान्दार र भरोसायुक्त भएको प्रभाव पैदा गराउँछ । गुलावी रंगलाई मातृत्व भावनासँग जोडेर देखाउने गरिन्छ । यसैले यो भन्न सकिन्छ कि रंगको छनोट जति सामाजिक मान्यताबाट प्रभावित हुन्छ, त्यति नै बजार पनि त्यसबाट प्रभावित हुन्छ ।
३. यस्तो पनि तर्क गरिन्छ कि छोरीहरु कोमल र नाजुक हुन्छन् । गुलावी रंगलाई पनि नाजुक चिजको पहिचानको रुपमा देखाउने गरिन्छ । गुलावी आँखा, गुलावी गाला या गुलावी व्यवहार सबै केटीहरुसँग जोडिएको हुन्छ । गुलावी रंगको कपडा केटाले लगाएमा त्यो मजाकको विषय बन्छ । त्यसैले आमाहरुले बच्चामै छोरीलाई गुलावी र छोरालाई नीलो रंगको कपडा रोज्ने गर्छन् ।
२०औं शताब्दीको सुरुवातमा रंगाको विभाजन ठीक विपरीत थियो । हङकङबाट प्रकाशित हुने महिलासम्बन्धी पत्रिका ‘होम जनरल’ का अनुसार त्यसबेला केटालाई गुलावी र केटीलाई नीलो रंग मानिन्थ्यो । त्यसबेला गुलावी रंग साहित्य र मजबुतको प्रतीक मानिन्थ्यो । गुलावी रंगलाई आरामदायक र आँखालाई नबिझाउने रंग मानिन्छ । नीलो रंग भने कोमल र नाजकु केटीका लागि उपयुक्त हुने मानिन्थ्यो ।
तर, सन् १९४० सम्म आइपुग्दा नपुग्दै त्यो प्रचलन र मान्यतामा ठीक विपरीत परिवर्तन आउो । यस्तो किन भयो भन्ने कुरा इतिहासकारले पनि बताउन सकेका छैनन् । पेरिस या फ्रेन्च फेसनका कारण गुलावी रंग केटी र नीलो रंग केटालाई उपयुक्त हुने मान्न थालिएको हो । आजको युगामा भने लिंगका आधारमा रंगको चयन सही नहुने अधिकांश आमाबाबुको तर्क छ ।
तपाईहरु आफ्ना छोराछोरीका लागि जुनसुकै रंग चयन गर्न सक्नुहुनेछ छर त्यसले आफ्ना सन्तानमा रंगको अन्तरको मानसिकता नदेखियोस् । छोरा र छोरी आमाबाबुका लागि बराबर हुन्छन् ।